Inguqulo 0.9.6.0 – Longest sekwephuzile, ezikhishwe ngosuku lemfishakati
December 21, 2014 by okunikezwayo Shiya amazwana
Le nguqulo unezela muva okungeze the new ngezilimi eziyishumi Google ukuhumusha. Ukukhululwa egxile ekulweni izixwayiso kanye izilokazane abaye bangena ngesinyenyela Transposh ngonyaka odlule.
Omunye angase azibuze, uma software ayikashintshi, indlela kufika izimbungulu okungene ngokunyenya? Impendulo ilula ukuthi, akekho isofthiwe akusho in a cleaner, Izinto zashintsha sonke isikhathi, ezintsha PHP wanezela izixwayiso esiqinile bacasuka ezinye abasebenzisi, kwakukhona ezintsha for wordpress kanye nezinye software ingxenye, kanye ukushintshelwa ungumninimandla onke Google ukuhumusha injini. Labo izinguquko wadala izimo ukuthi ikhodi yamanje akakwazanga ukusingatha, kodwa sifisa le nguqulo entsha kuyoba kancane more ukwenza.
Ezenye Izinto olusha luhlanganisa Yoast SEO amamephu esayithi ukuhlanganiswa (Udinga ukulamula it, Iziqondiso in ikhodi yethu).
Isici encane ukususa engenamsebenzi auto izinguqulo (lapho Translations wayelingana izintambo original, okwenzeka lapho abanye sites safike evinjwe Google)
Izinto more, ifayela readme.txt umngane wakho.
Enethemba uthole izinto ngesivinini kanye kweqa 🙂